The Moon MM - Page 302 of 302 - News and Entertainment
“ပိုးတွေ့ရှိသူဒေါက်တာ အမြန်ဆုံးကျန်းမာကာ အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် သူပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေနဲ့သစ္စာပြုပြီး ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ တင်ဇာမော်”
April 12, 2020 by Wai Lu
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တင်ဇာမော်ကတော့ အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲထိရောက်အောင် သီဆိုနိုင်တဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားသူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဇာမော်က လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကြောင့် ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့လေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လေ့ရှိသူပါ..။ တင်ဇာမော်က ဒီနေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာပြုတဲ့ ကုသိုလ်လေးတွေကြောင့် ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သူတွေကို ကုပေးရင်းကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် အမြန်ဆုံးသက်သာကာ အိမ်ကို ပြန်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေ မျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တင်ဇာမော်ကတော့ “အန်တီဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ရှင့်…. သမီးပြုသမျှ ကုသိုလ်တွေ နဲ့ သစ္စာပြုပြီး ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်နော်။ ပိန်းကြာရွက်ပေါ်ရေမတင်သကဲ့သို့ လန်းဆန်းကျန်းမာ ဦးမော့ရင်ကော့ပြီး အိမ်ကိုအမြန်ဆုံး ပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ နှစ်သစ် အကြို ဆုတောင်းနဲ့ အတူ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ အားလုံး ကပ်ဘေးမှ ရှောင်ကွင်း လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ (၂၀၂၀) ဧပြီ … Read more
အိမ်ထဲမှာဘဲ မိသားစုနဲ့အတူ အိမ်တွင်းသင်္ကြန်လေးပြုလုပ်ကာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ခင်လှိုင်တို့ရဲ့ ကြည်နူးစရာ ဗီဒီယိုလေး
ပရိသတ်တွေချစ်ခင် အားပေးနေတဲ့ ဟာသ လူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် ပရိသတ်တွေကို ဟာသတွေ နဲ့ တင်ဆက်နေတဲ့ အနုပညာရှင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဟာသ ဒရမ်မာ အားလုံးပိုင်နိုင်တဲ့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။အခုဆိုရင်တော့ ခင်လှိုင်ဟာ ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို အမြဲတမ်း ရယ်မောပျော်ရွှင်စေနဲ့ ဦးခင်လှိုင်ကတော့ သားသမီးတွေကိုလည်း အချိန်ပေးပြီး အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၁၂)ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာတော့ ခင်လှိုင်က မိသားစုလိုက် အိမ်တွင်းသင်္ကြန်ကျင်းပနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်မှာ မျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုလေးတဲ့အတူ ခင်လှိုင်က“အိမ်တွင်းပုန်း မိသားစုသင်္ကြန် ..။ ချစ်မိတ်ဆွေတို့လည်း အိမ်မှာကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ..။” ဆိုပြီး အားလုံးအတွက် နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် ခင်လှိုင်တို့မိသားစုရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source-Khin Hlaing … Read more
သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ ချစ်ရသူတွေရဲ့ surprise တိုက်တာ ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်လေးတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်အချစ် တော် နန်းဆုရတီစိုးက တော့ အဆိုပညာမှာလည်းထူးချွန် သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည် တွေနဲ့ လည်းပြည့်စုံတဲ့ အနုပညာရှင်မင်းသမီးချောလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လှပတဲ့အသားရေနဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကိုရီးယားမလေးအလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် လှပနေသူလေးကတော့ ရှမ်းတရုတ်ကပြားမလေး နန်းဆုပါ ။ အချစ်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေကနေ ရုန်းထွက်ပြီးနောက်မှာတော့ နန်းဆုတစ်ယောက် ခရီးတွေထွက်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်းအချိန်ကုန်နေခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေ့မှာတော့ နန်းဆုရတီစိုးက သူမကို ချစ်ကြသူတွေဆီက Surprise လက်ဆောင်တွေရရှိခဲ့ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်။ နန်းစုကတော့ “သြက်န်အကြိုနေ့မှာ ပရိသတ်တွေက surprise တိုက်ပါတယ် နန်းဆု ပုံလေးတွေကို ပန်းချီ artist (K Art Gallery) မှာအပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးတာတဲ့ လှလိုက်တာ။ အမြဲတမ်းပျော်အောင်ထားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ ပုံလေးတွေပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေရော ဆွဲပေးတဲ့ … Read more
ဒီနေ့မှာပဲ အသက် (၂၄) နှစ် ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်လေး ဟဲဗီးဖြိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ ဟဲဗီဖြိုးကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အတော်များများမှာ အရေးပါတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟဲဗီးဖြိုးရဲ့ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကို ပရိသတ်တွေသာမက အနုပညာရှင်တွေကပါ နှစ်သက်သဘောကျကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် ကလေးသရုပ်ဆောင်ဟဲဗီးဖြိုးရဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟဲဗီးဖြိုးကတော့ အခုဆိုရင်တော့ အသက်၂၄ နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသရုပ်ဆောင်ဟဲဗီးဖြိုးကတော့ ပရိသတ်မျက်စိရှေ့အောက်တင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူကြီးအရွ ယ်ရောက်လာပါပြီနော်။ ဟဲဗီးဖြိုးလေးကတော့ အသက်ကြီးလာချိန်မှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးကွာနေခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ ယုန်လေးနဲ့အတူတူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပြန်လည်သရုပ်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟဲဗီးဖြိုးတစ်ယောက် ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့လေးကစပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ ရရှိပါစေ။အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပါစေလို့ ဆိုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ Source-ဟဲဗီးဖြိုး Zawgyi ဒီေန႔မွာပဲ အသက္ (၂၄) ႏွစ္ ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ေလး ဟဲဗီးၿဖိဳး ပရိသတ္ႀကီးေရ ဟဲဗီၿဖိဳးကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အေရးပါတဲ့ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပရိသတ္အားေပးမႈမ်ားစြာရရွိခဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဟဲဗီးၿဖိဳးရဲ႕ အ႐ြယ္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းမႈေတြကို ပရိသတ္ေတြသာမက … Read more
အိမ်အကူမလေးအတွက် စုစုပေါင်းအလှူငွေ (၃၃)သိန်းကျော်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ သရုပ်ဆောင်၊ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ယုန်လေးကတော့ စုစုပေါင်းအလှူငွေ (၃၃)သိန်းကျော်ကို အိမ်အကူမလေးကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ညီမလေး အဖေ နဲ့ ဦးလေး ကို မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံတွင် သွားတွေ့ ကူခဲ့ပါပြီ ဆေးရုံရှိ လူနာစောင့်များနှင့် . လိုအပ်သူများကိုလည်း SP Bakery မှ လူ အယောက် (၃၀၀) စာ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည် ။ စုစုပေါင်း အကူငွေ (၃၃)သိန်း (၇)သောင်း (၇)ထောင် ရရှိပါသည်။ ညီမလေးလည်း အမြန်နေကောင်းပြီး ဘဝအသစ်မှာ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေ” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စိတ်ထားကောင်းပြီး ကူညီလိုစိတ်ရှိတဲ့ယုန်လေးကတော့ လူချစ်လူခင်ပေါသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး ဝါသနာရှင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေးတွေကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးလေ့ရှိသူပါ။ယုန်လေးကတော့ အိမ်အကူမလေးအတွက် ဆေးကုသမှုနဲ့ဆေးရုံက ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်ပြီးဆင်းကာ ဘဝ သစ်တစ်ခုမှာ အဆင်ပြေဖို့အတွက် … Read more
Covid-19 လူနာနံပါတ်(၃၇) က အဆိုတော်မျိုးကြီးမဟုတ်ကြောင်း ဖြေရှင်းလာတဲ့ မျိုးကြီးရဲ့ အမျိုးသမီး
ပရိသတ်ကြီးရေ အခုဆိုရင်တော့ Covid – 19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း (၃၈) ယောက်ရှိပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ(၁၂) ရက်နေ့ နံနက်(၂)နာရီက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ Covid – 19 Positive လူနာတွေထဲမှာ အဆိုတော် မျိုးကြီး ပါသွားပြီလို့ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ သတင်းတွေ ပြန့်နေခဲ့တာပါ။ ထိုသတင်းကို ကြားပြီး မျိုးကြီးရဲ့ ပရိသတ်တွေ ၊အနုပညာလောကသားတွေ အားလုံးစိတ်ပူလို့ နေကြပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အဆိုတော်မျိုးကြီးနဲ့ အမျိုးသမီးက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကတဆင့် အခုလိုပဲ ရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ အဆိုတော်မျိုးကြီးနဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ “Case 37 က ကိုမျိုးကြီး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ပူပေးကြတာ ကျေးဇူးပါ။ God Bless … Read more
အိမ်အကူမလေးအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Rapper MCကယားလေး၊MCကျားကြီးနဲ့ Min Z
ဘဝသမား Rapper တွေဖြစ်ကြတဲ့ MC ကယားလေး၊MCကျားကြီး နဲ့ Min Z တို့ကတော့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ယုန်လေးက အိမ်အကူမလေးအတွက် ကူညီချင်ကြောင်း ပိုစ့်တင်ပြီးနောက်မှာတော့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “လူဆိုတာ စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် .ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ အိမ်အကူ ညီမလေးကို ကူမယ့် Post တင်တယ် သူတို့ တတ်နိုင်သလောက် ကူချင်တယ်ပေါ့ အများကြီး မတတ်နိုင်တော့ သူတို့ အားငယ်တယ် နည်းတာ များတာ က အဓိက မှမဟုတ်တာ ကျွန်တော်စိတ်ထဲ လည်း မကောင်းဘူး ပီတိလည်း အရမ်းဖြစ်တယ် Rap Skill တွေ ဘာတွေက နောက်မှ ကျွန်တော်ကူညီလိုက်တဲ့ညီလေးတွေက ကျွန်တော်လို စိတ်တွေပဲ ကယားလေး နဲ့ ကျားကြီးက တစ်ယောက် (၁)သောင်း Min … Read more
အိမ်တွင်းသင်္ကြန်လေးနဲ့ အတာရေလေးပက်ဖြန်းခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်တို့မိသားစု
လတ်တလောမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှုကြောင့် မြန်မာတို့ရဲ့ နှစ်ကူးရိုးရာဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲတော်ကို အရင်နှစ်တွေလို ကျင်းပခွင့်မရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေတော်တော်များများလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်သက်လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး သက်မွန်မြင့်ကတော့ ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့လေးမှာ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ အိမ်တွင်သင်္ကြန်လေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို အိမ်တွင်းသင်္ကြန်လေးကျင်းပနေတဲ့ အကြောင်းကို Live လေးလွှင့်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း ပျော်ရွှင်ရအောင်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့သင်္ကြန်အကြိုနေ့လေးကတော့ သက်မွန်မြင့်ရဲ့ သားလေး အားချစ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်လေးဖြစ်တာကြောင့် မွေးနေ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်နေရင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ရေလောင်းရာကနေစပြီး အိမ်တွင်းသင်္ကြန်လေးကို ကျင်းပဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သက်ကတော့ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စရာသင်္ကြန်လေးဖြစ်စေဖို့ကိုလည်း ဆုတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်သက်က ပရိသတ်ကြီးတွေကို Facebook Live လေးကနေ တစ်ဆင့် အတာရေလေးပက်ဖြန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ပရိသတ်တွေရော ဒီနှစ်ရဲ့ ထူးထူးခြားခြားသင်္ကြန်အချိန်အခါလေးကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲဆိုတာပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။ … Read more
ယောက္ခမဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် စည်ပင်ဝန်ထမ်းနဲ့အနှေးယာဉ်မောင်း မိသားစုအတွက်အိမ်ထောင်စု၇၀၀စာ လှူဒါန်းသွားမယ့် စမိုင်းလ်
စမိုင်းလ်ကတော့ အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာဆိုသလို ဆက်တိုက်လှူဒါန်းနေသူတစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်ကြောင့် အခြေခံလူတန်းစားတွေ အင်မတန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ စမိုင်းလ်ကတော့ လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို အဓိကရွေးပြီး လှူဒါန်းနေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်း ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်တိုက်ကူညီမှုတွေပြုလုပ်နေသူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း စမိုင်းလ်တို့ ဇနီးမောင်နှံက အိမ်ထောင်စု (၇၀၀)စာအတွက်တစ်ပတ်စာလှူဒါန်းသွားမယ့်အကြောင်းကို စမိုင်းလ်က “မနက်ဖြန်ကျရောက်မဲ့ မောင့်အမေရဲ့ အသက်၇၀ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ရန်ကင်းရှိ စည်ပင်ဝန်ထမ်းများနဲ့ အနှေးယဉ်မောင်းများရဲ့မိသားစုများအတွက် အိမ်ထောင်စု ၇၀၀စာ တစ်ပတ်စာလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။” ဆိုပြီး အသိပေးထားပါတယ်။များအကျိုးအတွက်ဆိုရင် နောက်မတွန့်ဘဲ လက်မနှေးကူညီတတ်တဲ့စမိုင်းလ်ရဲ့ အလှူလေးတွေကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source-Smile Zawgyi ေယာကၡမျဖစ္သူရဲ႕ေမြးေန႔ အလွူအျဖစ္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းနဲ႔အေႏွးယာဥ္ေမာင္း မိသားစုအတြက္ အိမ္ေထာင္စု၇၀၀စာ လႉဒါန္းသြားမယ့္ စမိုင္းလ္ စမိုင္းလ္ကေတာ့ အလႉေရစက္လက္နဲ႔မကြာဆိုသလို ဆက္တိုက္လႉဒါန္းေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဂယက္ေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားေတြ အင္မတန္ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စမိုင္းလ္ကေတာ့ လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာေတြကို အဓိကေ႐ြးၿပီး … Read more
April 12, 2020 by The Moon MM